၂၀၁၂ ရဲ့အကောင်းဆုံးကား Audi A7 | မြန်မာပြည်သား
အကြံမမှား ၊ ရန်မပွားချင်အမှန်တရားက ငါတို့လက်တွင်မမှန်မော်ကြွား ၊ ရန်စော်ကားလျှင်တရားလက်တွင် ဓါးနှင့်ယှဉ်မည် ငါတို့သည်တရားလည်းဆောင် ဓါးလည်း ပြောင်၏ ငါတို့သည်တရားလည်းမွေးဓါးလည်း သွေး၏တရားတစ်ဖက် ဓါးတစ်လက်နှင့်မှားကွက်ဖွေရှာ သင် ငါတို့အား
မတန်တရာ ရန်မစွာနှင့် တရားလည်းသိ ဓါးလည်းရှိသည့်ငါတို့သည် မြန်မာပြည်သားများဖြစ်ကြ၏ မူလစာမျက်နှာ
၂၀၁၂ ရဲ့အကောင်းဆုံးကား Audi A7
kokomyanmarpyithar | July 25, 2012	| အမေရိကန်အခြေဆိုက် ကမ္ဘာကျော် Automobile magazine မှရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ခုနှစ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်း ဆုံး ကားကတော့ ဂျာမနီကုမ္မဏီ Audi မှထုတ်လုပ်တဲ့ 2012 Audi A7 ဖြစ်ပါတယ်။
Carbon emission နည်းတဲ့ အင်ဂျင်အမျိုးအစား ကားဖြစ်တဲ့အတွက် Car of the year ဆုပေးရန်ရွေး ချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအချက်တစ်ခု တည်းမဟုတ် ပဲ သူ့ရဲ့ အခြားအားသာချက်များ ရှိနေပါသေး တယ်။ အင်ဂျင် 4.0 liter, V8 ဖြစ်ပြီး မြင်းကောင်ရေအား ၃၀၀ အထိမောင်းနှင်နိုင်တဲ့ Supercharge အင်ဂျင်အမျိုးအစား အဖြစ်ပါတယ်။ ဂီယာ ရှစ်ချက်ထိုးဖြစ်ပြီး မြို့တွင်းမှာ ဒီဇယ် တစ်ဂါလံ ၁၈ မိုင်မောင်းနှင်ပါတယ်။ ဟိုင်းဝေးလမ်းမမှာတော့ တစ်ဂါလံ ၂၈ မိုင်အထိပြေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ acceleration ကောင်းမွန်ပြီး Brake system အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ Auto, Manual နှစ်မျိုးလုံးနဲ့မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ ဇိမ်ခံကားဖြစ်ပြီး Cooling system ပိုင်းလည်း အားဖြည့်ထားပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်နဲ့ accessory ကလည်း BMW ဇိမ်ခံကားတို့နဲ့ ယှဉ်လို့ရပါတယ်။
သူ့ရဲ့အသေးစိတ် specification ကတော့အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Type : : 3.0 liter supercharged, DOHC V6 gasoline engine with dual intercoolers, FSI direct injection and variable valve timing
Displacement : :3.0 liter [182.8 cu. in., 2995 cc
Horsepower : : 310 hp @ 5500-6500 RPM
Performance :0-60 MPH 5.4 sec.
Top Speed :130 MPH
City : : 18 mpg
Highway: : 28 mpg
Combined : : 22 mpg
Engine Oil: :7.2 qt. [6.8 liter]
Fuel Tank: :19.8 gal. [75 liter]
Battery: : 12 volts [110 amp/hr]
Alternator: :14 volts [190 amp]
Wheelbase: : 114.7 [2419 mm]
Overall Length : :195.6 in. [4969 mm]
Height (unloaded): :55.9 in. [1420 mm]
Front Track : : 64.7 in. [1644 mm]
Rear Track : : 64.4 in. [1635 mm]
Curb Weight : : 4210 lbs. [1909.6 kg]
Car of the Year ဆုရှင် Hyundai Elantra (4 photos) ၂၀၁၂ နှစ်ဆန်းပိုင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Detroit auto show မှ တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး ကား ရွေးချယ်...
Tags: featured	Category: စီးပွားရေး, သတင်း
« ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ လှူဒါန်းရန် ကာတွန်းပြပွဲကျင်းပမည်	ဆည်ဖျက်သိမ်းရေး မြစ်သားတွင် ဆန္ဒပြ »	သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်နှင့် VOA Interview	မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် နှင့် CNA Interview	Online FM နားဆင်ရန်	Share to…….	မြန်မာ့သတင်းမီဒီယာနှင့် Website များ	မြန်မာပြည်သားကို ဆက်သွယ်ရန်	ပြည်သူများအတွက် သတင်းများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ သိရှိစေရန် ဖော်ပြပေးပါမည်။သတင်းများပေးပို့လိုပါက author@myanmarpyithar.orgနှင့် kokomyanmarpyithar@yahoo.comသို့ဆက်သွယ် ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။	ပြည်တွင်းသတင်းစာနှင့် ဂျာနယ်များ	မြန်မာ့အလင်း
အပတ်စဉ်မျက်နှာသစ် Model ကဏ္ဍ	သင်ဇာနွယ်ဝင်း	မြန်မာ ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်း သီချင်း	သတင်းများ လအလိုက်ကြည့်ရှုရန်	Select Month December 2013 (13)
ဘောလုံး ပရိတ်သတ်များအတွက် up-to-date	Yangon Weather from Yahoo! Weather
အနုပညာရပ်ဝန်း	Myanmar Celebrity
Music FM Shwe-FM
International-FM ICT & Software	Cnet
© 2013 မြန်မာပြည်သား. All rights reserved. .